Date My Pet » How To Tora Your First Matanho With Online Dating
Makambonzwa atora zvinonyudza uye vakagadzirira kutanga kutsvaka zvimwe paIndaneti chinokosha. Ndiyo inonakidza, asi kutyisa ruzivo. imi kamwe kamwe mukana kuona uye kushamwaridzana zvakawanda anosarudza, kupfuura wasangana pagore! Asi kumirira kudanana paIndaneti hakusi chinhu chakadai misangano vanhu vari munhu uye zvechokwadi hahwuuyi bhuku mutemo ...
Kunzwisisa Vocab: Mumwe wokutanga uye inovhiringidza zvikuru matanho ari kubata lingo. Ava enyu nguva kudyidzana rokutanga, rudzii pfungwa hwaunoda kusiya uye sei munyika iwe kusarudza zvokuita?
Kungofanana mu "upenyu chaihwo" mashoko tinoshandisa chidzore pamusoro kudyidzana ane mhando, akadai kugwinha maoko, vanokweretesa pachavo kuti achitsanangura zvichangobva kuitika pakati vanhu vaviri. Pfungwa iyi ichiri zvinoshanda yako paIndaneti kusarudza:
se - Funga izvi sezvo kunyemwerera kuyambuka kubva mubhawa. Zvinogona anobatirira munhu anonyatsovatarira. zvisinei, hazvisi sezvo kuita sokuti iwe vakayambuka akati, "Mhoro."
kuchonya -Chinhu Kuchonya anongotaurwa nokukurumidza akatumwa sezvazvakanyorwa acharega.
chandinodisisa - Ndiwo kuti munhu iwe akataura mumutsara pana Starbucks. Iwe wakanzwa sesasaradzi dzomoto pakarepo; hongu mangosangana navo kupfuura, asi haukwanise kumirira dhumhira mukati kwavari zvakare.
mameseji - Ichi meseji pane "" munhu wabatwa akamirira kunzwa kubva zuva rose. Unovaona zvachose mauri.
Kuita kusarudza sei kutaura kunogona kusarudza kuita mhando uchimuka.
Kuvhundutsa uye katyamadza: Kana uchida kuverenga Profiles shoma asati kunyora zvako, kuti kukuvara.
– Zvakaoma kuziva kuti dzibatanidzwe Profile uye zvakadini kana uri mutsva paIndaneti kufambidzana. Haudi kunyora haiku, asi iwe haudi akaberekera vanhu nemisodzi mashoko hwako 5th giredhi piyano recital.
– Ita chokwadi kuti kupa pachedu mashoko, pane vanhu chiuru vanoda mafirimu uye 'vanoda kuwana wokugara naye mhosva,'Chii chaizvoizvo dzakasiyana pamusoro pako? (Ko iwe kuenda chikanywa chikoro uye ikozvino kushanda Marketing. zvichida, uchangobva vakanhonga parasailing?)
– Jekesai zvauri kutsvaga ari shamwari, kana usingadi vanhu angafunga venyu Profile ndiko nyepera.
Iva Bold: Makambonzwa akabatana paIndaneti kufambidzana varege kuva wallflower, uchida kuwana munhu!
– Une chinhu kurasikirwa! Ndezvipi mikana iwe vachamhanya kupinda munhu uyu? Zero kuti hapana; regai anobwaireiko pavo, kana iwe chaizvoizvo uchida mashoko.
– Musarega yomukati mubvunzo wenyu kuhwina. Hauzivi ndiani vangafarira mamuri, kutoti iwe tambozviedza. Hamuna kubatana kudanana paIndaneti kugara pakona nekurukirwa vakaita iwe? Kana iwe wakaita, Ndinofunga iwe uri isiri Website.
Edza chinhu chitsva: Hapana chakaipa kuziva "mhando wako,"Asi edzai kutaura nemumwe munhu rakasiyana kwenyu kare ukama.
Kana uine yenyu yemandorokwati pakombiyuta zviuru zvaungasarudza kutarira iwe, hapana chakaipa kuedza mvura kudzidza zvaunoda. zvichida, iwe enda musi ane chigure uye nevakawanda, "Ini chete havagoni kuva nomunhu honks mhino dzavo kuti mupenyu." Hapana chakaipa kuti, kana zvimwe imwi kudzidza kuti zvawakadzidziswa wakamirira vose pamwe. Hauzivi chii chaizoitika.
Iva zvauri: sezvo Dr. Seuss akariisa, "Ini ndini ani ndiri uye ndicho chinhu chikuru kuva." Kana Dr. Seuss akati, Zvinofanira kuva zvakanaka. Zvakaoma kutanga ukama nemunhu kana uri kuedza kuva munhu.
Hongu "hottie8675309" zvikuru kukwezva, asi imi hamugoni kuwana chinhu yavo Profile chaunacho zvakafanana. Iwe funga kuti iwe, "Zvakanaka vakatumidza 'The Grapes Yokutsamwa ' sezvo bhuku ravo kufarira. Ndinofunga kuverenga kuti chesekondari. "Usati unozviziva uri musi nemunhu akanyora ravo miteva zvidzidzo pamusoro 'The Grapes Yokutsamwa. ' rombo rakanaka kuti!
Online Dating Kuwana You Down?
Rudo Anogona Rambai Kwaungaita Out Yematambudziko?